Ogaden News Agency (ONA) – Eritrea oo Dib Usoo Ceshanaysa Xubinimadii IGAD.
Eritrea oo Dib Usoo Ceshanaysa Xubinimadii IGAD.
Sida laga soo xigtay masuuliin sar sare oo kamid ah dawlada Eritrea ayaa sheegaya in ay dib ugu laabanayso xubinimadii urur goboleedka IGA ee ay ku bahoobeen wadamada dhaca Geeska Africa.
Dawlada Eritrea ayaa iskaga baxday urur goboleedka IGAD kadib markii ay colaad balaadhan soo kala dhex gashay iyaga iyo dawlada Itoobiya oo wakhtigaas ahayd wadanka ugu tunka wayn urur goboleedka IGAD.
Sida uu warkan ay ONA heshay sheegayo dawlada Eritrea ayaa ka qaybgali doonta shirka IGAD ee lagu wado in uu qabsoomo maalinimada arbacada ah ee nagu soo aaday kaasi oo ka dhici doona magaalada Addis Ababa. Shirkan ayaa waxaa kasoo qaybgali doona dhamaan madaxda urur goboleedka IGAD.
Hadaba kusoo noqoshada IGAD ee Eritrea ayaa imanaysa xilli uu isbedal balaadhan ka jiro guud ahaan Geeska Africa gaar ahaan Itoobiya oo wax badan iska bedaleen siyaasadeedii gude iyo dibadba. Dadka falanqeeya arimaha siyaasada ayaa ku micneeyay talaabadan mid dhanka wanaagsan loo qaaday taasi oo u horseedi karta in xasilooni iyo nabad galiyo lagu soo dabaalo guud ahaan Geeska Africa.